Mareykanka oo sheegtay inay qaadeen weerarkii xalay ee Aw-dheegle – STAR FM SOMALIA
Mareykanka oo sheegtay inay qaadeen weerarkii xalay ee Aw-dheegle
Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamadiisa gaarka ah ay ka dambeeyeen weerarkii xalay saqdii dhexe lagu qaaday deegaanka Aw-dheegle ee gobolka Sh/hoose.
Sarkaal u hadlay dowlada Maraykanka ayaa u sheegay Laanta Afka Soomaaliga ee idaacada Codka Maraykanka in ay weerarkaas ay ka qeyb qaateen ciidamo Soomaali ah, ayna beegsadeen saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose.
Hase yeeshee sarkaalkan u hadlay dowlada Maraykanka ayaan faahfaahin dheeraad ah ka bixin weerarka lagu qaaday Aw-dheegle mana jirto illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlada Soomaaliya.
Waa weerarkii labaad ee ay dowlada Maraykanka sheeganayso inay ku lug lahayd muddo toddobaad ah,iyadoo duqeyn dhinaca cirka ah oo loo geysgtey saldhig ay ururka Alshababa ku lahaayeen deegaan ka tirsan degmada Buuloburte ay dowlada Maraykanka ku sheegtay in ay ku dishay 150 ka mid ah dagaalyahanada Alshabaab.
Hase yeeshee,Maxamed Aweys Abuukar oo ah guddoomiyaha dowladda Soomaaliya ugu magacaaban Awdheegle ayaa sheegay in diyaarado qumaatiga ukaca ay qiyaastii 60 illaa 70 askar ay ku daadayeen deegaanka.
Waxa uu sheegay in ciidamadaas ay weeraren saddex saldhig oo ku yaalla magaalada, ayna khasaare xooggan gaarsiiyeen mintidiinta.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in hal dagaalyahan looga dilay weerarka, balse ay iska caabiyeen oo ay fashiliyeen.
Weerar miino ah oo lagu qaaday ciidamada Koofurgalbeed iyo hoobiyaal lagu weeraray Kismaayo
Madaxweynaha oo dhagax dhigey dhismaha Kulliyada Sayniska iyo Tiknoolajiyada (Sawirro)